Teny Quote 300 Nosoratan'ny Mpanoratra Anony ho an'ny 2020 - Quotes Pedia
364 isa sy teny nolazainy
Tsy zakan'ny fiainana ny fiainana. Tsy fantatrao izay mitranga amin'ny fotoana manaraka. Ao anatin'ny toe-java-misy tahaka izany dia matetika isika no mahita zavatra manan-danja amin'ny fiainantsika.
Indraindray dia mahatsiaro ho ambany sy kivy isika. Ny kely famantarana ny antony manosika dia afaka manao fahagagana hatrany amin'ny toe-javatra toy izany. Noho izany, ny Mpanoratra tsy fantatra dia eo foana hanome anao izany loharano kely fampaherezana sy hery manosika izany mba tsy hahatsapanao ho ambany na kivy amin'ny fotoana mety.
Ny antony lehibe ananan'ireo mpanoratra ireo ny fahatsapana ny hanoratana ny fisainany dia tsy noho ny fahazoana laza na laza ary laza fotsiny, fa natao ihany izy ireo mba hanomezanao fahatsarana tsara sy tsara mba hahafahanao manao izany. hisintona ny tenanao hiala amin'ny hustle-bustle ary mahazo angovo hanao zavatra vaovao sy mamorona araka ny fombanao.
Ireo Teny nindramina tsy fantatra anarana miresaka foana momba ny fanaparitahana ny fitiavana manodidina anao. Ny fitiavana dia angovo azo antoka izay mahavita mamorona na ny ratsy aza.
Feno fankahalana sy alahelo ity tontolo ity. Ny fitiavana dia manana hery manasitrana hialana amin'ny eritreritra ratsy rehetra avy amin'ny olon-drehetra ary mameno an'io olona afaka mamadika ny zavatra tsara sy manavao.
Raha tena te hanova olona ianao ary hamoaka ilay olona tsara fanahy avy aminy, angamba izany dia maty tao anatin'izany olona izany taona maro izay, ny hany zavatra iray azonao atao dia ny mitia ilay olona tsy misy fepetra.
Nahazo hery lehibe hanasitranana olona ny fitiavana, ary io fanahy io dia afaka manova ny antony manosika sy fikasana ho an'ny olona mandrakizay. Matetika isika no very, ary ny fitiavana irery no angovo afaka miverina ho amin'ny làlanao indray.
Ireo mpanoratra tsy mitonona anarana eto manosika anao hanao teny fohy tsara, ampianaro anao ny maha-zava-dehibe ny fitiavana sy ny fitaomam-panahy ary manampy anao hiarina indray na dia tsy in-jato mahery aza ianao. Tsy fantatrao mihitsy raha ity faha-101 ity no hamoizinao!
Mitoera tsara sy tohizo hatrany ny finoana. Tsara kokoa ny zavatra mialoha. - Anonyme
Ny fivoarana eo alohan'ny zava-tsarotra dia mety ho sarotra, saingy ny olona izay maharesy ny tahotra azy ary…
Aza manandrana manova olona; tiavo fotsiny izy ireo. Ny fitiavana no manova antsika. - Anonyme
Samy mitovy ihany isika rehetra nefa tsy manam-paharoa. Isika rehetra dia manana zavatra mampiavaka antsika amin'ny…
Ny saina tsara manoloana ny zava-drehetra dia manome fiainana sambatra kokoa. - Anonyme
Manantena antsika hatrany ny fanantenana. Manome antsika hery hitrandrahana izany na dia amin'ny fotoan-tsarotra aza. In ...
Aza miantehitra amin'ny hafa intsony. - Anonyme
Miaina irery isika eo amin'ny fiainana. Rehefa mitohy ny fiainana dia manao fifandraisana maro isika. Maro amin'izy ireo…
Isao ny fitahianao fa tsy olana. - Anonyme
Tena zava-dehibe ny toe-tsaina. Ny fomba fijerintsika sy ny ataontsika no mamaritra hoe iza isika. Ny toe-tsaintsika…
Mitsikia hatrany ary indray andro no ho reraka ny fampahoriana anao. - Anonyme
Rehefa mandia ny fiainana isika dia tsy azo ihodivirana fa hiatrika tsara sy ny fotoana ratsy koa isika…
Aza matoky teny, matoky asa. - Anonyme
Latsaka ny teny tsy misy hetsika. Azontsika atao ny mipetraka sy mieritreritra ireo zavatra samihafa tiantsika ...
Aza manaiky ho resy. Mitaky fotoana ny zavatra lehibe. Mahareta. - Anonyme
Mety hiatrika toe-javatra samihafa ianao eo amin'ny fiainana rehefa tianao ny ho sorona. Matotra sy hendry…
Misy zavatra mitaky fotoana. Mijanona ho manam-paharetana ary mijanona ho tsara, hihatsara ny zavatra. - Anonyme
Voalaza fa ny renirano dia manapaka ny vatolampy tsy noho ny heriny, fa noho ny heriny…
Raha tsy misy ny orana dia tsy misy na inona na inona mitombo, mianara miforona amin'ny tafio-drivotra. - Anonyme
Nilaza izy fa ny tsy fahombiazana dia ampahany lehibe amin'ny fiainantsika satria izy ireo ihany no mamolavola antsika ho an'ny…
Ny fiainana tsara kokoa noho ny tena namana. - Anonyme
Ny fiainana tsara kokoa noho ny tena namana, ary marina izany! Na dia betsaka aza ny olona manodidina antsika, ao…
Raha afaka mijanona ho tsara ianao amin'ny toe-javatra ratsy, dia mandresy ianao. - Anonyme
Amin'ny fiainana, ny ady lehibe indrindra izay ilainao miady dia tsy misy afa-tsy ny tenanao. It…
Mifoha isanandro ary mankasitraka ny fiainana. - Anonyme
Mahareta. Mitaky fotoana ny zavatra tsara. - Anonyme
Aza omena alalana olona hafa hanimba ny andronao. - Anonyme
Sarobidy ny fiainana. Ny olona izay miaina amin'ny fiainantsika dia manokana fa eo am-pivoarana fifandraisana,…
Ny toetra tsara dia manampy amin'ny fametrahana elanelana misy eo amin'ny fahaizana sy ny filana. - Anonyme
Samy tahian ny fahaiza-manao sy talenta isan-karazany isika rehetra. Rehefa mihalehibe isika dia voaparitaka…
Mahalala izay holazaina ny olona hendry. Ny olon-kendry mahalala raha tsy izany na tsia. - Anonyme
Ny mahira-tsaina dia olona iray mahalala izay tokony holazaina na inona na inona toe-javatra. Traikefa ananany ...
Rehefa manome antony an-jatony ny fahasimbana sy ny fitomaniana ny fiainana dia asehoy fiainana fa misy antony an-tapitrisany mitsiky sy ihomehezana. Mahereza hatrany. - Anonyme
Tsy milamina ny fiainana. Ho be dia be ny antony handrava, hahatsiaro sy potika ary mitomany. Na izany aza, ...
Mafy loatra ny fiainana. Mila alahelo ny fahafantarana hoe inona ny fahasambarana, ny tabataba mankasitraka ny fahanginana ary ny tsy fisian'ny fanomezan-danja ny fanatrehana izany. - Anonyme
Mafy ny fiainana ary marina izany. Tsy takatsika ny lanjan'ny zavatra sasany mandra-pahatongan'izany…
Manomboka isan'andro amin'ny fankasitrahana. - Anonyme
Atombohy amin'ny fankasitrahana isan'andro ny isan'andro ary izany dia hampisondrotra ny fanahinao amin'izay hahafahanao…
Ajanony ny faniriana hisy zavatra hitranga ary mandehana. - Anonyme
Biby tena maniry loatra ny olombelona, ​​ary kamo ihany koa. Maniry ny fahombiazana isika amin'ny…
Manonofy eo ambany masonao ny nofinofinao, fa miaina eo amin'ny masonao ny nofinofinao. - Anonyme
Ny nofy dia iray amin'ireo singa tena ilaina amin'ny fiainantsika. Raha misy olona tsy manonofy, manana an'io olona io…
Ny fitiavana ny tena dia zavatra iray tena ilaina nefa tsy raharahantsika matetika izany eo afovoan'ny fihazonana fifandraisana samy hafa…
Aza matahotra ny tsy ho tanteraka ianao. Mianara amin'izany ary tohizo hatrany. Ny fikirizana dia izay miteraka fahatsarana. - Anonyme
Ny tsy fahombiazana dia andry fahombiazana. Raha tsy misy tsy fahombiazana dia ho sarotra aminao ny mankafy ny tsiro ...
Tsara kokoa ny fanginana noho ny tantara tsy ilaina. - Anonyme
Ny zavatra niavaka samy hafa dia nahatonga antsika tsy hitovy. Fa isika rehetra dia tokony hianatra handray andraikitra mifanaraka amin'ny toe-javatra samihafa mba…
Ny hatsaram-panahy dia mahatonga anao ho olona tsara tarehy indrindra eto an-tany, na inona na inona endriny. - Anonyme
Tsy mitoetra amin'ny fomba fijerinao ny hatsarana, fa kosa amin'ny fomba fitondranao ...
Ataovy izany satria nilaza izy ireo fa tsy azonao atao. - Anonyme